OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro: fampitahana lalina | Androidsis
OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro: fampitahana lalina
Ignatius Room | | Fitaovana Android, OnePlus
Saika nanomboka ny orinasa OnePlus no nalaza teo amin'ny tsena niaraka tamin'ny OnePlus One, terminal ara-toekarena miaraka amin'ny tombony lehibe indrindra amin'izao fotoana izaoIty orinasa aziatika ity dia nandefa modely vaovao eny an-tsena, isaky ny 6 volana. Isaky ny kinova vaovao dia tsy mampiakatra kely fotsiny ny vidiny, fa koa ny tombony (na dia tsy matetika aza).
Saingy, toa ity taona ity dia te hiditra amin'ny sehatra avo lenta izy, olona izay mandany vola be amin'ny smartphone. Amin'ity taona ity, ny filokana OnePlus dia fantsona roa: OnePlus 7 sy OnePlus 7. Pro Araka ny ampoizinao, ny kinova Pro, ankoatry ny lafo kokoa, dia manome andian-dahatsoratra manamarina ny vidiny. Atorinay anao izao a fampitahana eo amin'ny OnePlus 7 sy ny OnePlus 7 Pro.
1 Fampitahana latabatra OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro
2 Efijery AMOLED ho an'ny rehetra
3 Tsy misy karazana
4 Fizarana sary
5 Hery sy fahombiazan'ny OnePlus 7
6 Ny vidin'ny OnePlus 7 sy OnePlus 7 Pro
7 BUTS roa lehibe arakaraka ny fijerinao azy
8 Inona ny OnePlus novidiako?
Fampitahana latabatra OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro
Tsy misy fomba hafainganam-pandeha haingana sy be maso hijerena izay tena mahasamihafa azy roa tonta noho ny amin'ny latabatra Amin'ity latabatra ity dia afaka jerenao haingana hoe iza no lehibe indrindra ny fahasamihafana misy eo amin'ny OnePlus 7 sy ny OnePlus 7 Pro, fahasamihafana izay tsipihinay etsy ambany.
efijery AMOLED 6.41 santimetatra - Fanapahan-kevitra 2.340 × 1.080 - 402 dpi - Famerenana ny tahan'ny 90 Hz AMOLED 6.67 santimetatra - fanapahan-kevitra 3.120 x 1.440 - 516 dpi
Tabilao Adreno 640 Adreno 640
Fahatsiarovana RAM 6/8 GB karazana LPDDR4X 6/8/12 GB karazana LPDDR4X
Fitahirizana anatiny 128/256 GG 128 / 256 GB
Safidy mamoha Fitaovana fakantsary eo amin'ny efijery - Fankatoavana ny tarehy Fitaovana fakantsary eo amin'ny efijery - Fankatoavana ny tarehy
Fakan-tsary Rear Stabiliser optika - Principal 48 mpx f / 1.7 - faharoa 5 mpx f / 2.4 Stabiliser optika - Principal 48 mpx f / 1.6 - Telephoto 3x 8 mpx f2.4 - Zoro malalaka 16 mpx f / 2.2 zoro fahitana faha-117
Fakan-tsary eo aloha 16 mpx f / 2.0 miaraka amin'ny fanamafisana ny elektronika 16 mpx f / 2.0 miaraka amin'ny fanamafisana ny elektronika
Rafitra fandidiana OxygenOS mifototra amin'ny Android 9 OxygenOS mifototra amin'ny Android 9
bateria 3.700 mAh miaraka amina tohana haingana 4.000 mAh miaraka amina tohana haingana
lanja Gramin'ny 182 Gramin'ny 206
lafiny 157.7 × 74.8 × 8.2 mm 162.6 × 75.9 × 8.8 mm
loko Mirror Gray Almond / Mirror Gray / Nebula Blue
Audio Ireo mpandahateny stereo - Dolby Atmos Ireo mpandahateny stereo - Dolby Atmos
seranana USB 3.1 karazana C USB 3.1 karazana C
vidiny avy amin'ny 559 euro 709 euros
Efijery AMOLED ho an'ny rehetra
Ny pikantsary miaraka amin'ny teknolojia AMOLED dia manome antsika tombony maromaro izay efa noresahintsika tamin'ny fotoana maromaro, ny tena manintona indrindra mamela antsika hitahiry bateria rehefa mampiasa loko mainty tanteraka isika. Tamin'ny fanombohana ny Android Q, Google dia efa nanamafy fa ny Android manaraka dia hampiditra maody maizina, fomba iray izay ho hita amin'ny fampiharana rehetra an'ny goavambe fikarohana.
Ny OnePlus 7 Pro dia tsy manome antsika efijery anoloana mahatalanjona tsy misy marika, fa koa manolotra anay ny tahan'ny famelomana 90 Hz, taham-pahavitrihana izay manome antsika fahamendrehana bebe kokoa sy mazava kokoa rehefa mikororoka haingana isika fa mamela antsika hankafy ireo lalao mitaky be indrindra amin'ny fomba mora sy hita kokoa.
OnePlus dia mirehareha fa ny maodely 7 Pro no voalohany mampihatra fisehoana miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 90HZ, na dia tsy io no avo indrindra hitantsika eny an-tsena amin'izao fotoana izao, satria tsy mandeha lavitra intsony, ny Razer Phone dia manome antsika taham-pahavitrihana ambony kokoa, 120 Hz ary mandritra ny roa taona, raha ny taranaka voalohany amin'ity smartphone ity.
Tsy misy karazana
Ny tena manintona natolotry ny OnePlus 7 Pro dia hita eo amin'ny efijery, efijery iray izay manarona saika ny lafiny rehetra eo alohan'ilay fitaovana, ao anatin'izany ny sisiny, afa-tsy faritra kely iray any ambany. Ity famolavolana ity dia tsy midika hoe tsy manana fakantsary anoloana izy, satria eo amin'ny tapany ambony amin'ny terminal no misy azy ary azo esorina, izany hoe, miseho izany ary manjavona araky ny filantsika.
Ny olana mety haterak'izany dia raha lavo ny terminal, fa isaky ny olana dia misy ny vahaolana. Raha ny filazan'ny mpanamboatra azy, ny fiasan'ny fakantsary azo esorina dia mifandray amin'ny hafainganam-pandeha, accelerometera izay raha mahatsikaritra fa latsaka ny terminal dia hanafina haingana ilay modely fakantsary mba tsy ho tapaka.
Tsara be daholo aloha. Fa kosa mekanika, mekanika mandeha amin'ny motera rehefa mandeha ny fotoana mety hijanona tsy miasa intsony noho ny fidiran'ny vovoka na karazana loto hafa. Na mety hiala amin'ny fampiasana azy fotsiny.
Ny OnePlus 7 ho an'ny anjarany dia manolotra antsika famolavolana tena mitovy amin'ny taranaka teo aloha, miaraka amin'ny notch miendrika ranomaso eo alohan'ilay fitaovana. Raha mampiasa fankasitrahana ny tarehy ianao hamaha ny terminal, ity maodely ity dia hamela anao hiditra amin'ny terminal haingana kokoa nefa tsy mila miandry ny hiseho ny modely eo alohan'ny modely Pro.
Na eo aza ny zava-misy fa maro ny mpanamboatra no manizingizina fa ny smartphone dia hanolo ny fakantsary SLR (hadalana feno fiandrianana) indraindray, soa ihany fa ho an'ny mpampiasa dia manohy manatsara an'ity fizarana ity isan-taona ao amin'ny tobiny izy ireo, satria ny finday avo lenta dia lasa fitaovana ampiasaina indrindra haka sary na horonan-tsary, ao anatin'izany ny hetsika manokana, indrindra ho an'ny fampiononana omeny antsika.
The OnePlus 7 Pro misafidy ny hanaraka ny fironana amin'ny tsena ary ampidiro fakan-tsary 3 any aoriana. Ny lehibe dia manome antsika vahaolana 48 mpx, arahin'ny solosaina telefaona 8 mpx misy fanamafisana 3x ary ny farany dia zoro 16 mpx manana zoro 117 degre.
Ho azy, OnePlus 7 dia manolotra antsika, toy ny teo alohany, fakantsary 2 any aoriana, ny lehibe dia mitovy hitantsika amin'ny maodely Pro miaraka amin'ny famahana 48 mpx ary ny faharoa kosa 5 mpx.
Hery sy fahombiazan'ny OnePlus 7
Ny OnePlus 7 sy 7 Pro vaovao dia tantanan'ny Ny processeur farany an'i Qualcomm, ny Snapdragon 855. Na izany aza, ao anatin'ny terminal sy manampy amin'ny fitantanana ny rafitra fandidiana dia mahita kinova samihafa izahay. Amin'ny lafiny iray, ny OnePlus 7 sy ny OnePlus 7 Pro dia misy amin'ny kinova ny RAM 6 GB sy 128 GB fitehirizana ary miaraka RAM 8 GB ary 128 GB fitehirizana.
Ny maodely Pro dia misy ihany koa ao kinova RAM 12 ary fitehirizana 256 GB. Ankoatr'izay dia tsy misy afa-tsy amin'ny iray amin'ireo loko telo misy ilay maodely Pro izy, satria ny OnePlus 7 dia tsy hita afa-tsy amin'ny loko Mirror Gray, na dia misy kinova manokana amin'ny mena aza ho tonga any India sy Sina.
Ireo terminal roa ireo dia mandefa rafitra iray an'ny Fangatsiahana rano 10 sosona mitazona ny mari-pana amin'ny telefaona, na dia mampiasa ny hery rehetra omeny antsika aza isika.
Ny vidin'ny OnePlus 7 sy OnePlus 7 Pro
Araka ny hitantsika eo amin'ny tabilao etsy ambony, ny vidiny manomboka an'ny OnePlus 7 ho an'ny kinova fototra an'ny OnePlus 7 dia manomboka amin'ny 559 euro, raha 7 euro kosa ny kinova fototra an'ny OnePlus 709.
OnePlus 7 6 GB RAM + fitehirizana 128 GB 559 euros Mirror Gray
OnePlus 7 8 GB RAM + fitehirizana 256 GB 609 euros Mirror Gray
OnePlus 7 Pro 6 GB RAM + fitehirizana 128 GB 709 euros Mirror Gray
OnePlus 7 Pro 8 GB RAM + fitehirizana 256 GB 759 euros Mirror Gray - Nebula Blue - Almond
OnePlus 7 Pro 12 GB RAM + fitehirizana 256 GB 829 euros nebula manga
BUTS roa lehibe arakaraka ny fijerinao azy
Ny elanelan'ny OnePlus iray manontolo, hatramin'ny nanombohan'ny orinasa ny maodely voalohany, dia mbola tsy nanolotra fanoherana voamarina amin'ny rano ao amin'ireo tobiny, fanamarinana IP izay omen'ny ankamaroan'ny toeram-piantsonana avo lenta izay hitantsika eo amin'ny tsena. Ny fanamarinana IPxx dia manome toky antsika fa ny terminal misy antsika dia mahatohitra ny isan'ny taratasy fanamarinana azony. Ny mahazatra indrindra dia IP68, fanamarinana manome toky antsika fa raha latsaka ao anaty rano ny terminal Tsy ho simba amin'ny fidiran'ny rano.
Ny iray amin'ireo lehibe indrindra dia ny tsy manome antsika rafitra famandrihana tsy misy tariby. Ny lehiben'ny orinasa dia manome toky fa miadana be ity karazana enta-mavesatra ity. Mba hanonerana an'io faharetana io dia manome antsika rafitra mpamily haingam-pandeha haingana ilay mpanamboatra mamela antsika hampiditra ny terminal ao anatin'ny adiny iray mahery. Hatreto aloha dia mbola mety tsara.
Ny famoahana tsy misy tariby dia ahafahantsika mametraka ny terminal eo ambonin'ny charger mba hahafahana miakatra nefa tsy mampiasa tariby. Na dia miadana kokoa noho ny rafi-pandefasana tariby misy tariby aza izy (amin'ny tariby) amin'ny alina dia manana fotoana betsaka kokoa handoavana izany amin'ny hafainganam-pandeha tadiavinao izahay, satria tsy mikasa ny hivoaka mandritra ny ora vitsivitsy izahay. Ny fahamoran'ny tsy fitadiavana tariby ny mampiditra ny terminal dia zavatra rehefa zatra izany dia tsy te hiverina amin'ny fomba mahazatra.
Inona ny OnePlus novidiako?
Amin'ny voalohany, ary toy ny mahazatra, miankina amin'ny teti-bola daholo izany. Ny kinova Pro an'ny OnePlus ary manana fahasamihafana izy ireo raha oharina amin'ny mahazatra an'ny 150 euro, araka ny hitantsika amin'ny fizarana teo aloha. Raha manana an'ireny 150 euro ireny ianao ary tsy fantatra izay hatao amin'izy ireo, ny maodely Pro dia safidy tsara tokony hodinihina, raha fantatrao fa handeha ho an'ny OnePlus vaovao ianao.
Na izany aza, raha mbola tsy niditra an-tsehatra tamin'ilay soloin'ny OnePlus ianao dia izao Fotoana mety tsara hihinananana ny maodely taloha, ny OnePlus 6T, maodely mizara fiasa marobe amin'ny OnePlus 7 vaovao afa-tsy ny processeur, izay no tena mahasamihafa azy. Ity maodely ity dia hita amin'ny Amazon sy Ebay amin'ny vidin'ny 500 euro fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » OnePlus 7 vs OnePlus 7 Pro: fampitahana lalina
Ireo ny sarany voasivan'ny Honor 20 sy 20 Pro [+ Famaritana]
Vahaolana amin'ny olana amin'ny fampandrenesana ao amin'ny Xiaomi miaraka amin'ny Notch